Blog iray natokana ho an'ny vaovao literatiora sy ny vaovao fanonta izahay. Tianay ny manadihady amin'ny mpanoratra mahazatra ary manadihady ireo mpanoratra faran'izay tsara tahaka Dolores Round o Marwan mandray mpanoratra vaovao ihany koa.
Manana mpanjohy Twitter maherin'ny 450.000 ao amin'ny kaontinay @A_literature Avy aiza
Tianay ny mamindra amin'ireo hetsika samihafa. Hatramin'ny 2015 dia nandeha niaraka tamin'ny hafa nankany amin'ny manan-daza izahay Loka nomen'ny planeta ary holazainay aminao mivantana momba azy io.
Ny ekipa fanontana an'ny Actualidad Literatura dia misy vondrona iray manam-pahaizana momba ny haisoratra, mpanoratra ary mpanoratra nahazo loka isan-karazany. Raha te ho anisan'ny ekipa koa ianao dia afaka andefaso aminay ity takelaka ity mba ho tonga mpanonta.
Avy amin'ny volkano Manchega tamin'ny taona 70 dia nivoaka aho tamin'ny naha mpamaky, mpanoratra ary mpankafy horonantsary. Avy eo dia nanomboka nianatra filôlôjia anglisy aho, nampianatra sy nandika ny fiteny sachon kely. Tapitra ny fampiofanana nataoko ho toy ny mpanitsy tsipelina sy fanoritana endrika ho an'ny mpanonta, mpanoratra tsy miankina ary matihanina amin'ny fifandraisana. Mitantana tranokala roa aho: MDCA - CORRECCIONES (https://mdcacorrecciones.jimdofree.com/) sy MDCA - FAMPIANARANA BAIBOLY SY SPANISH (https: //mdca-aprende-a-tu-aire-ingles-y-espanol.jimdosite. com /). Manana tranokala literatiora koa aho, MDCA - NOVELAS Y RELATOS https://mdcanovelasyrelatos.jimdofree.com/) ary bilaogy iray, MDCA - QUÉ HAY DE LO MÍO (https://marioladiazcanoarevalo.blogspot.com.es/), aiza Manoratra momba ny literatiora, mozika, andiam-pahitalavitra, sinema ary olana ara-kolotsaina amin'ny ankapobeny aho. Miaraka amin'ny fahalalako ny fanovana sy ny fandaminana, namoaka tantara dimy aho: "Marie", ilay trilogy manan-tantara "Ny amboadia sy ny kintana" ary "Amin'ny volana aprily".
Bachelor of Education, manonona fiteny sy literatiora, avy amin'ny Udone (Universidad de Oriente, Nucleo Nueva Esparta, Venezoelà). Profesora amin'ny oniversite amin'ny sezan'ny tantara, literatiora espaniola sy amerikanina latina, ary koa mozika (filalaovana sy fitendrena gitara). Bachelor of Education, manonona fiteny sy haisoratra, (Udone). Profesora momba ny literatiora, ny tantara ary ny mozika. Mpanoratra aho, miavaka amin'ny tononkalo sy ny tantara an-tanàn-dehibe. Ny sasany amin'ireo bokiko dia: "Transeúnte", tantara; "Vatana eny amoron-dranomasina", fanangonana tononkalo. Mpanamboatra votoaty sy mpamoaka lahatsoratra ihany koa aho.
Tonian-dahatsoratra sy mpanoratra hatramin'ny 2007. Mpankafy boky hatramin'ny 1981. Nanomboka tamin'ny fahazazako dia nandany boky. Ilay nahatonga ahy nitsaoka azy ireo? Nutcracker sy ny Mpanjakan'ny totozy. Ankehitriny, ankoatry ny maha mpamaky ahy, izaho dia mpanoratra ny tantaran'ny ankizy, ny tanora, ny tantaram-pitiavana, ny fitantarana ary ny erotika. Azonao atao ny mahita ahy hoe Encarni Arcoya na Kayla Leiz.
Izaho dia Ana Lena Rivera, mpanoratra ny andian-dahatsoratra noveloman'ny tantara an-tsehatra nataon'i Gracia San Sebastián. Ny tranga voalohany an'ny Gracia, Lo que Callan los Muertos, dia nahazo ny loka Torrente Ballester Award 2017 ary ny loka famaranana ho an'ny loka Fernando Lara 2017. Fatratra ny fikajiana heloka bevava hatramin'ny fahazazako, fony aho nandao an'i Mortadelo sy Filemón ho an'i Poirot sy Miss Marple, noho izany taorian'ny taona maro naha mpitantana tamina orinasa lehibe maro dia nanova orinasa aho noho ny fitiavako fatratra: Ilay tantara momba ny heloka bevava. Tamin'izany no nahaterahan'i Gracia San Sebastián, mpikaroka ao amin'ny andiam-pilalaovan'ny mpitsongo ahy, izay ahafahan'ny olon-tsotra, toa antsika rehetra, mety ho mpanao heloka bevava, ary mamono mihitsy aza rehefa mametraka azy ireo amin'ny toe-javatra sarotra ny fiainana. Teraka tao Asturias aho, manana mari-pahaizana momba ny lalàna sy ny fitantanan-draharaha ary ny fitantanana orinasa ary nipetraka tany Madrid hatramin'ny androko. Indraindray aho dia mila manimbolo ny ranomasina, ny Ranomasina Cantabrian, matanjaka, velona ary mampidi-doza, toy ireo tantara soratako aminao.
Toy ny mpanohitra maro, mpanara-maso fanabeazana ary miaraka amin'ny fialamboly marobe, ao anatin'izany ny famakiana. Mankasitraka kilasika tsara aho saingy tsy manakaiky ny tarika rehefa misy zava-baovao amin'ny haisoratra tonga eo am-pelatanako. Ankasitrahako ihany koa ny fanamorana sy fanamorana ny 'ebooks' fa izaho dia iray amin'ireo izay tia mamaky amin'ny fahatsapana ilay taratasy, toy ny fanaonay hatrizay.
Mpanoratra ny dia sy haisoratra, tia litera exotic. Amin'ny maha mpanoratra tantara foronina ahy dia namoaka tantara nahazo loka aho tany Espana, Perou ary Japon ary ny boky Cuentos de las Tierras Calidas.
Injeniera ary tia tantara. Ny lalako amin'ny literatiora dia natomboka tamin'ny "The Circle of Fire" an'i Mariane Curley ary natambatra tamin'ny "Toxina" an'i Robin Cook. Manana mialoha filan'ny nofinofy aho, na ny Young olon-dehibe na ny olon-dehibe. Etsy ankilany, tiako koa ny mankafy andian-tantara, sarimihetsika na manga tsara. Izay rehetra mitondra tantara miaraka aminy dia tongasoa. Izaho koa dia mpandrindra ny bilaogy literatiora iray izay anoratako ny hevitro momba ireo boky novakiako: http://librosdelcielo.blogspot.com/
Diplaoma amin'ny filôzôfia Hispanika. Nafana fo tamin'ny fanoratana aho, nanao ny Master tamin'ny fanoratana fitantarana sy famoronana. Hatramin'ny fahazazako dia tiako ny literatiora, noho izany ao amin'ity bilaogy ity no ahitanao ny torohevitra tsara indrindra momba ny fomba fanoratan-dahatsoratra, na hankafizanao ny fijerena tsara ireo boky mahazatra.
Teraka tany Barcelona aho tamin'ny volana lasa tamin'ny taona 80. Nahazo diplaoma tamin'ny Pedagogy avy amin'ny UNED aho, ary nahatonga ny fanabeazana ho fomba fiaina matihaniko. Mandritra izany fotoana izany dia mihevitra ny tenako ho mpahay tantara "amateur" aho, variana amin'ny fandinihana ny lasa ary indrindra amin'ny adin'ny olombelona. Hobby, ity iray ity, izay ampiarahiko amin'ny famakiana, fanangonana boky isan-karazany ary, amin'ny ankapobeny, miaraka amin'ny literatiora amin'ny fari-javatra isan-karazany azo atao. Mikasika ny fialamboliko amin'ny literatiora dia mila milaza aho fa ny boky tiako indrindra dia ny "The Godfather" nataon'i Mario Puzzo, ny saga tiako indrindra dia ny an'i Santiago Posteguillo natokana ho an'ny Punic Wars, ny lohako mpanoratra dia i Arturo Pérez-Reverte ary ny boky tiako horesahina dia i Don Francisco Gomez de Quevedo.
Teraka tamin'io andro io tamin'ny Printsy Henry avy any Angletera aho. Andriana any Angletera izy ary mpitahiry boky. Misaotra Karma. (tsy misy fanafohezana).